– Kutaa Lammaffaa Taammanaa Bitimaa irraa | Guraandhala 22, 2014
* Inni “oofan” jedhamu kun keessumaa naannolee: Sadeen Sooddoo, Afran Walisoo, Kudhalamaan Caboo, Jahan Ammayyaa fi Torban Kuttaayee faatti akka malee beekamaa dha. Kun kan jedhamuuf: warra abbootii biyyaa, abbootii Gadaa, gootota, jagnoota fi gamnoota fayiifi! Waanan bara 1998 keessa magaalaa Walisootti waayee naannoo Wancii, isa magaalaa Walisoo irra kiilomeetira 30 callaa fagaate argamuu, abbootii seenaa Afran Walisoo beekamoo keessaa tokko kan ture, Baqqalaa Bantii Beellamoo Roggee irraa dhagayeen as irratti isiniif yoon dhiyeesse, waayee “Oofanii” kana sirriitti isinii addeessa. Bara Darguu irraa kaasee: “dhuudhaan oofanii kun borcamaa deemee, abbaadhuma fe’eefuu “oofan” jechuun calqabame. Booda beekaa fi gamni Wancii, Baqqalaa Magarsaa Ita’aa yaa’ii Wancii irratti yaada tokko dhiyeesse. Kunis dhuudhaan oofanii baduu hin qabu. Yoo namni hundumtuu wal haa qixxaatu kan jettan ta’emmoo eenyumaafuu “oofan” jechuun haa hafu.” Erga baay’ee irratti mariyatamee booda walumaa galteen nama hundumaa walqixxeessuuf jedhamee, akka gaaf sana irraa kaasee eenyumaafuu “oofan” hin jedhamne dhoowwame. Booda xinnoo ture Baqqalaa Magarsaa du’e. Wanci guutuun yaa’ee, Qaqaldhii fi Caboonis itti-dabalamanii isa “oofan” jechaa awwaalani. Warri Baqqalaa Magarsaa Ita’aa Golgaa Goolee otoo Sidaamni biyya keenya hin qababatin, warra yaa’ii gadaatiin filamuun biyya bulchan turani. Isaan warra abbootii biyyaa kan Wancii keessatti argamu. Kanaaf, gaafa inni du’e sana biyyi buqqa’ee bawuun isa “oofan” jechuun gaggeesse.”